“Horyaalka Premier League wuxuu ka sii baxayaa gacmaha Liverpool.” – Jamie Carragher – Gool FM - Idman news
(Liverpool) 22 Jan 2021. Kabtankii hore kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa sheegay in Reds ay tahay inay ka walwalsho inaysan ka mid noqon afarta ugu sareysa horyaalka Premier League, isagoo muujiyay in horyaalka uu ka fog yahay Reds.
Burnley ayaa si lama filaan ah u jabisay rikoorkii garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga dkaatay kooxda Liverpool 0-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Premier League, Reds ayaana haatan 6 dhibcood ka dambeysa hoggaamiyaasha horyaalka ee Manchester United.
Liverpool ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 34 dhibcood, waxayna lix dhibcood ka dambeysaa hoggaamiyeyaasha Manchester United, iyadoo laga yaabaa inay u dhacdo kaalinta lixaad haddii Tottenham Hotspur iyo Everton ay guuleystaan ​​kulamadooda.
Sida laga soo xigtay Sky Sports, Jamie Carragher ayaa sheegay:
“Fursada Liverpool ee ku guuleysiga horyaalka waa sii yaraaneysaa, runtii way adkaan doontaa marxaladan, waxaa jira lix dhibcood oo inoo dhexeeya anaga iyo hoggaamiyaasha.”
“Weli waa suurtagal in la soo laabto, laakiin heerka Manchester United waa mid cajiib ah labadii bilood ee ugu dambeysay.”
“Liverpool waxay bilaabi doontaa inay ka walwasho afarta boos ee ugu horeysa, kooxda waxay u baahan tahay inay soo laabato si ay u guuleysato kulamada isla markaana ay goolal u dhaliso ka hor inta aysan ka fikirin inay difaacdaan horyaalkooda.”
“Aad ayay u liiteen, Klopp-na wuu rumaysan waayey wixii ku dhacay Liverpool toddobaadyadii la soo dhaafay.”
Previous Koeman oo dhaleeceeyay shaqsiyadda ciyaartoyda Barcelona kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Cornella – Gool FM
Next Real Madrid oo xaqiijisay in Tababaraheeda Zinedine Zidane laga helay Korona Fayras – Gool FM
Ciidamo la wareegay taallada Daljirka Dahsoon kahor dibad-baxa Sabtida
Madaxweyne Deni Oo Ka Degay Boosaaso – SAWIRO March 5, 2021
Ciidamo la wareegay taallada Daljirka Dahsoon kahor dibad-baxa Sabtida March 5, 2021
Britain and the EU plunged into new crisis over food imports to Northern Ireland March 5, 2021